I-PAVERS VS PATIO YEKHONKRITHI (I-PROS & CONS KUNYE NESIKHOKELO SOYILO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi I-Pavers vs Patio yeKhonkrithi (i-Pros & Cons kunye nesikhokelo soYilo)
Isikhokelo sokuyilwa kwesikhonkwane sekhonkrithi kubandakanya isikhombisi kunye neengozi, iindleko kwaye yeyiphi eyona ilungele ukuhlala ixesha elide, ukugcinwa kunye nokufakwa. Xa ujongene noluphi uhlobo lwezinto zokwakha oza kuzisebenzisa kwindlela yakho yokuhamba, indlela yokuhamba, okanye ipatio, ezona zinto zidumileyo kunye nezinto onokukhetha kuzo ziipavile kunye nekhonkrithi.
Izibhengezo ziyafumaneka kwiimo ezahlukeneyo, izitayile, iipateni, kunye nemibala enika abanini khaya kunye nabaqulunqi ukhetho oluninzi olwahlukileyo lokudala ipatio eyahlukileyo encoma ikhaya lakho kunye nembonakalo yomhlaba.
Uhlobo lwendalo lwekhonkrithi luthathwa njengolubandayo, olungadibaniyo nolungathandekiyo, kodwa ipatio yekhonkrithi inokupeyintwa, ipolishwe kwaye igqitywe ukufana nezinye iintlobo zezinto zokwakha ezifana nelitye lendalo, ukhuni, izitena kunye nethayile.
Ukuba ucwangcisa ukuvuselela okanye ukufaka ipatio entsha esi sikhokelo sinokukunceda ubone ukuba iipavile okanye ikhonkrithi lukhetho olufanelekileyo kwindawo yakho yokuhlala ngaphandle.
indlela yokubopha iqhina lokufaka ngesandla
Zithini iiParaos Patios?
Iipara zeProses kunye ne Cons
Ukuzinza, ukomelela kunye nokuziTshintsha
Ukungafani kunye noxanduva lokusingqongileyo
Ukufakwa ixesha elide
Ixabiso eliphezulu ngaphambili
Khulisa ukhula ngokuhamba kwexesha
Yintoni iPatio ephathekayo?
Iiprosesa zePatio kunye neengozi
Ukungafani kweMeko yeKhonkrithi
Ukuzinza kunye namandla
Iindleko zekhonkrithi zePatio vs Pavers
Ukungenelela kumaxabiso ePaver
IPaver's vs Concrete Patio Durability
Pavers ’vs Ukugcinwa kwePatio ephathekayo
Ufakelo lwePaver's vs Concrete Patio
Amatye agciniweyo okanye iipavile zi-slabs kunye neebhloko ezenziwe ngamatye endalo afana nelitye leflegi, imarble, i-travertine, i-porcelain, izitena (udongwe), irabha kunye neplastiki.
Iipavile zisetyenziselwa ukwenza iidriveways, iipatio, iiphuli zedama, iindlela zokuhamba, okanye iindlela, ezisetyenziswa njengenye indlela yekhonkrithi yezi projekthi.
Iiparaver zepeyinti zenziwe ngemibala eyahlukeneyo, uburhabaxa, iipateni kwaye zihlala ziziqwenga ezincinci zobukhulu obahlukeneyo kunye neemilo. Ngokwesiqhelo iipatiyidi zeeparaver zakhiwa ngeepavile ezininzi ezinamalungu agcwaliswe ngesanti okanye izinto zesanti ezininzi ezinceda ukugcina amatye endaweni.
Ezi pavers zifakwe kwipateni yokungenelela kwaye zenza inkqubo egudileyo neyomeleleyo yendlela.
Iipavile azithambekele ekuqhekekeni okanye ekuqhekekeni ngenxa yokudibana kwazo kwaye zinokuncedisa nakwindawo yokuhambisa amanzi. Ngenxa yokuba bhetyebhetye xa ifakwe kakuhle, iipavile zinokuhlala ngaphezulu kweminyaka engamashumi amahlanu.
Iiphava ziyilelwe ukumelana nokuhla kweqondo lobushushu; Esi sesinye sezizathu zokuba iipavile zisetyenziswe ngcono kwiindawo ezinemozulu ezahlukeneyo kunye notshintsho lwamaxesha onyaka.
Amabala kwiipheyinti akabonakali kangako ngenxa yeepateni ezibazifihlisile; amabala amaninzi anokucocwa ngokulula ngesepha namanzi.
Ukulungiswa kwepavile akunamthungo kwaye kulula kakhulu ukukwenza- indlela elula yokuyilungisa iyityumze ngesando kwaye uyiqhekeze emhlabeni kwaye uyibuyisele entsha, njengokutshintsha iqhekeza lephazili .
Amatywina anokusetyenziswa ukukhusela iipheyiji kukonakala kwendalo kunye nokwenza ulondolozo nokucoca kube lula.
Ngenxa yesibonelelo sokulungiswa ngokulula kunye nokuphinda kusetyenziswe isisombululo esibonelelwa ziipavumente, le nkqubo yolondolozo kunye nokufakwa endaweni kwezinye kubiza ixabiso eliphantsi kakhulu kunezinye iindidi zezinto ezenziwe ngepeyinti.
Xa kuziwa kuyilo, akukho siphelo kwisitayile sendlela yokwakha, imilo kunye nephethini. Kuba iipavile zenziwe ngezinto zendalo aziyi kuphulukana nombala wazo okanye zigqibe ngokulula.
Ipeyinti nayo iyakuhlala ixesha elide kwaye umbala wayo awuyi kuchaphazeleka nakuluphi na uhlobo lokukhanya kwe-ultraviolet-okuthetha ukuba ukusebenzisa iipavumente kutyalo-mali olulungileyo kwaye kunceda ukuxabisa ixabiso lepropathi yakho.
Ukufaka iipeyinti zokudibanisa kunzima kunokuba kusadinga amanqanaba angaphezulu kunye nomhlaba wenziwe kwaye uhlala unemilinganiselo yesiko emayilandelwe. Xa zibekwe okokuqala, iipavile zitshixiwe ngokuqinileyo; kodwa ngokuhamba kwexesha banokuqalisa ukukhululeka kwaye bohlukane omnye komnye.
Iindleko zokuqala zofakelo lweepavile zinokuphakama kunezinye iindlela ngenxa yeendleko zokulinganisa nokubeka iziseko; Kungenxa yoko le nto iipavile zilungele umhlaba.
Enye into yexabiso zizinto zokwakha kunye nezixhobo ezifunekayo ukufakela ipatio kwaye, xa ukhetha izinto ezikumgangatho ophezulu kunye neendleko ezinje ngamatye okuhombisa kunye nokuhombisa kwizibiyeli zakho, iindleko zinokuphela zingaphezulu kwe-50% kutyalo-mali lwangaphambili. iindleko.
Kuba ipavumente yakhiwe ngamaqhekeza amancinci enza izilayidi ezininzi phakathi kwezo yunithi zizaliswe yisanti ekufakweni.
Le mihlaba ihlanjwa lula ziimvula okanye xa kuhlanjwa rhoqo, yiyo loo nto yenza ukuba imbewu yokhula ihlale phantsi kwezi slits kwaye ekuhambeni kwexesha, olu khula lungazithatha iipheyile kwaye lunokonakalisa iipavile ekuhambeni kwexesha.
Kwimizi-mveliso yokwakha sesona sixhobo sisetyenziswayo esiqhelekileyo esisetyenziswa njengesiseko solwakhiwo oluninzi.
Ikhonkrithi yenziwe ngokudibeneyo (ihlala isanti kunye negrabile) exutywe kwaye iboshwe kunye ngesamente kunye namanzi kwaye isetyenziswe ekwakheni ngokusebenzisa ikhonkrithi yolwakhiwo, ulwakhiwo lwe-slab, ulwakhiwo lwezitepsi kunye nezinye izinto zokwakha.
Ikhonkrithi ikwayinto eyaziwayo kakhulu yepatio ngenxa yokuhombisa kwayo okwahlukileyo kunye nokuyilwa okungenamda.
Iipatio zekhonkrithi zibonelela ngokudityaniswa komthungo phakathi kwendawo yangaphakathi nangaphandle, kuba ikhonkrithi yindawo efanelekileyo yokuhombisa indawo yangaphandle njengokitshi ongaphandle kunye negumbi lokuhlala, indawo yomlilo yangaphandle kunye neempawu zamanzi.
Iipatio zekhonkrithi zinokufakwa isitampu, zibhalwe ngestensile okanye zibhale iipateni ezilingisa ezinye izinto ezithandwayo zokuhombisa ezifana nezitena, amatye eflegi, iisileyiti kunye neethayile.
Inkqubela phambili kubuchule bokubala imibala, idayi kunye nezixhobo zesitampu zinegalelo elikhulu kuyilo olwenziwayo lwepatio yekhonkrithi.
Ngeentlobo ezahlukeneyo zamabala kunye nezinye iindlela zokubala kunye neendlela ezikhoyo kule mihla, yenza kube lula ukufezekisa malunga nayo nayiphi na imibala yokutshatisa okanye ukudibanisa nembonakalo yendalo yendlu yakho kunye nokuncoma indawo yokuhlala yangaphakathi.
Kukwakho neepatheni ezahlukeneyo kunye neendlela zoyilo ezinje ngeepateni ezinesitampu, ukubhalwa kweentsimbi, ukukrolwa, ukuhlanganiswa okutyhilekileyo kunye nokunye ukwenza umphezulu odibanayo nomhlobiso wangaphakathi kunye nembonakalo yangaphandle.
Ipatio yekhonkrithi nayo yomelele kakhulu kwaye inokuma kwiimeko zemozulu ezibi kakhulu. Iipatio eziphathekayo aziyi kubola, i-warp okanye isinki, kwaye ayinakucima umlilo.
Xa ifakwe ngonyango olufanelekileyo, ukuqiniswa okuchanekileyo, ukufumana amanzi kakuhle kunye namalungu olawulo, ezi zinto zinokuthintela i-slab yekhonkrithi ekuqhekekeni okungahleliwe.
Ngokusebenzisa isinyithi esininzi kunye nokongezwa kwe-rebar kwigridi yeenyawo ezi-2, kuya kwenza ikhonkrithi ethululelweyo yomelele kakhulu, yomelele kwaye iya kuhlala amashumi eminyaka. Amakhonkrithi ekhonkrithi anzima, amelana neempembelelo kwaye amelana ukuya kuthi ga kwi-2,500 yePSI eyenza isiseko esomeleleyo nesomeleleyo sayo nayiphi na imisebenzi yangaphandle.
Xa uthelekisa nezinye izinto zokwakha iipavile yokwakha, ikhonkrithi kulula ukuyigcina ngenxa yomphezulu wayo oqinileyo kwaye ikusindisela umsebenzi wokudambisa kunye nokwenza unyaka nonyaka.
Ikhonkrithi nayo ayinakuthintelwa zizinambuzane okanye zihlaselwe zizinambuzane, ukubola kweenkuni, ukungunda, ukusasazeka kwaye akunakuthwala ukukhula kokhula. Tshayela ngokucocekileyo ikhonkrithi kwaye ngamanye amaxesha uyihlambe ngamanzi usebenzisa umbhobho wegadi.
elona khadi lilungileyo lokuthenga ngetyala
Iindleko zokuqala zeepatio zekhonkrithi eziqhelekileyo zifikeleleka ngakumbi ngenxa yexabiso eliphantsi lezinto ezisetyenzisiweyo kunye nabasebenzi abancinci. Ikhonkrithi ingafakwa isitampu, ikrolwe, ifakwe isincamathelisi okanye ifake ubume ukufana nelitye lendalo okanye isitena seqhekeza ngeqhezu leendleko.
Ngokusebenzisa ipatio yekonkriti eveliswe ekhaya ibonisa indawo ephantsi yokusingqongileyo, kuba igcina amaplanga kwaye ishenxisa isidingo sokugcinwa rhoqo kusetyenziswa amabala eenkuni asetyenziswayo kunye nabatywina. Sebenzisa ipatio yekhonkrithi ikuvumela ukuba usebenzise izinto ezinokuphinda zisetyenziswe ezinjengeentsimbi zentsimbi okanye ikhonkrithi ediliziweyo.
Kwiindawo ezinemvula rhoqo okanye ubusika obubandayo, umngcipheko wokutyibilika kunye nokuwa unokuphakanyiswa bubukho bamanzi okanye umkhenkce kumphezulu wekhonkrithi eqinileyo.
Ukuba iintanda okanye iichips azilungiswa, inokubangela ingozi enkulu yokuhamba. Ezi mpawu zenza ipati ekhonkrithi iyingozi kubantwana abancinci, abantu abadala kunye nabanye bathambekele ekuweni.
izihlangu ezilokhwe eziluhlaza emtshatweni
Kwiindawo apho amaqondo obushushu aphezulu kakhulu okanye asezantsi afunyanwa, kunokubangela inqanaba eliphezulu lokuncipha nokwanda, oko ke kwenza ukuba ikhonkrithi ithambekele ekuqhekekeni nasekonakaleni.
Ukulungisa oku kuqhekeka kunokuba yindleko kwaye kunzima ukukulungisa kuba kunokufuna isahlulo esikhulu sepatiyo kufuneka ichithwe kwaye ithululwe ikhonkrithi kwakhona.
Ukuba ezi zinto ziyenzeka, ukuthelekisa ikhonkrithi emva kokulungiswa okungako kunokuba kubiza. Ukulungiswa okanye ukwanda okunje kuzisa ukubakho kokuqhubeka koyilo kunye nembonakalo kunokuba nzima ukufikelela kuyo.
Kwiimeko ezininzi, imibala yepatio yekhonkrithi ayihlanganiswanga kwisilayidi iphela sekhonkrithi; Endaweni yokuba imibala luhlobo oluthile lonyango olongezwa kulwahlulo oluphezulu lwesilayidi- kwaye ngenxa yoku, imibala inokuwohloka okanye icothe ngokulula.
Ikhonkrithi egalelweyo inomndilili ojikeleze i-3,000 ukuya kwi-4,000 ye-PSI ngelixa ii-pavers zi-8,000 PSI okanye ngaphezulu.
Iipatio zekhonkrithi zinokuziqhelanisa okuphantsi kwaye zikhawulelwe kuphuhliso, azinako ukwandisa okanye ukuncipha ngokulula. Oku kunika ukuzinza okuncinci kwipatio yekhonkrithi.
Zininzi izinto ekufuneka uzithathele ingqalelo xa ufuna ukuthelekisa ukuba zingakanani iindleko zepati zekhonkrithi xa kuthelekiswa nepavers ezinje ngomhlaba ofuna ukuwugquma, izixhobo ozifunayo, umsebenzi kunye nokususwa kweepavili zangaphambili okanye ikhonkrithi.
Ixabiso eliphakathi kwiipatio zekhonkrithi ezicacileyo ziphakathi kwe- $ 2.00 kunye ne- $ 5.00 ngonyawo wesikwere kunye ne-avareji ye- $ 6.00 kunye ne- $ 10.00 yekhonkrithi enesitampu. Ukudibanisa iipavile kwelinye icala, zinexabiso eliphakathi kwe- $ 12.00 kunye ne-22.00 yeedola ngonyawo wesikwere.
Iindleko zomndilili we-slab ekhonkrithi ecacileyo iphakathi kwe- $ 2.00 kunye ne-5.00 yeenyawo ngonyawo wesikwere
I-avareji yeendleko zekhonkrithi yokuhombisa okanye enesitampu iphakathi kwe- $ 6.00 kunye ne- $ 10.00 (kuxhomekeke kuyilo)
Umndilili womsebenzi wesiko (imida, imibala okanye isicelo sesandla) iindleko phakathi kwe- $ 10.00 kunye ne- $ 15.00 ngonyawo wesikwere
Ixabiso eliphakathi leenyawo ezili-16 ngeenyawo ezingama-20 zepatiyadi yekhonkrithi iphakathi:
$ 640 kunye ne-1,600 yeedola kwisiseko esisisiseko
Iidola ezili-1,920 kunye ne-3,200 yeedola kwikhonkrithi enesitampu
$ 3,200 kunye ne-4,800 yeedola kwipatio yesiko ekhonkrithi
Iindleko zokulungisa iipatio zekhonkrithi ziphakathi kwe- $ 5.00 okanye zinokuya phezulu njenge- $ 300.00 kuxhomekeke kubungakanani bomonakalo kunye nobunzima bokulungiswa.
Ixabiso eliqhelekileyo lokungena kwiipatios eziphakathi kwe- $ 12.00 kunye ne- $ 22.00 ngenyawo lesikwere
Ixabiso eliphakathi leenyawo ezili-16 ngeenyawo ezingama-20 zepatio eyenziwe ngokudibanisa iipareji iphakathi kwe- $ 3,840 kunye ne-7,040 yeedola
Iindleko zokulungisa i-paver pativer edibeneyo inokuba sezantsi njenge- $ 1.00 okanye inokuphakama ifike kwi-75.00 yeedola ngokuxhomekeke kubungakanani bomonakalo kunye nobunzima bokulungiswa.
Nokuba ukhetha ukufaka ikhonkrithi okanye iipavita, ufuna imveliso eyomeleleyo kwaye iya kuma uvavanyo lwexesha. Ipeyinti yomelele kunekhonkrithi kwaye ihlala iminyaka engama-50 nangaphezulu; inokuxhasa ubunzima obuphindwe kane kunobunzima bekhonkrithi ngenxa yezinto ezinamandla kunye nenkqubo yokulungisa elula.
Ikhonkrithi ingaphantsi kwesiqingatha esixinene njengeepavile nto leyo ethetha ukuba ikhonkrithi inakho ukufunxa amanzi kunokuwabeka - oku kubangela ukuba ikhonkrithi iqhekeke xa ivezwe bubushushu obugqithisileyo.
Iipavers azifane zichaphazeleke ngenxa yomxube wokudityaniswa kunye nendlela yazo yokudibana. Ukunyanzelwa okuphezulu kokuphambuka kunye nokuxinana kwendalo akuvumeli amanzi ukuba angene kwiipheyinti.
Kodwa ngelixa ikhonkrithi ihlala ithanda ukuqhekeka ngokuhamba kwexesha, iipavile kwelinye icala zinokuzimela ngokwahlukeneyo.
s mores kits umtshato umtshato
Zombini ezi ntlobo zepatio zifuna ukugcinwa rhoqo kwaye zombini ikhonkrithi kunye neepavita kufuneka zitywinwe rhoqo ukunyusa ukuzinza.
Phakathi kweentlobo ezimbini zezinto zepatio, ikhonkrithi kulula ukuyigcina kuba ifuna kuphela isepha namanzi ukucoca; kodwa ekuhambeni kwexesha, iipatio zekhonkrithi zisenokuqhekeka kwaye ziya kuba nebala ngokuhamba kwexesha.
Iitywina zinokunceda ukuthintela ukuqhekeka kunye nebala kodwa kufuneka zifakwe rhoqo; Ngokuphinda usebenzise isitywina ngokuphindaphindiweyo, inokwenza umhlaba utyibilike, oku kunokunyusa iindleko zokugcina ubomi kwaye kunokuchaphazela umbala wekhonkrithi.
Ngokwahlukileyo, i-pavers 'sealant ayichaphazeli umbala kwaye inokugcina uphawu lwabo lokumelana nesiliphu.
Ukucoca iipavile kukwalula kodwa kungabi lula njengeepatio zekhonkrithi ngenxa yokuba zinamaqhekeza amaninzi. Ukhula kunye nezinye izityalo zingakhula phakathi kweepavile kwaye ke, ukuzigcina kunokuba ngumceli mngeni omkhulu.
Kuhlala kulunge kakhulu ukuqesha ingcali ukuze yakhe ipatio yekhonkrithi okanye enye eyenziwe ngeepheyiji, kuba ziyingcali ebaleni kwaye kukho amanyathelo amaninzi abandakanyekayo.
Ukuxinana kunye nokulungiswa kwesiseko zezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe, kuba iimpazamo ezincinci zinokuba neziphumo eziphambili.
Ukudibanisa iipavile kufuna inkqubo yokufaka enzima ngakumbi. I-patio ephakathi ithatha iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 ukufaka iipavile ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni ngenxa yomjikelo wolwakhiwo olude kunye nenkqubo efunekayo ekufakweni kwayo. Apha ngezantsi kukho inkqubo yokufaka:
Ukuxinana kwesiseko esisezantsi
Ukufakwa kwifayibha yeGeotextile
Ukubeka i Paver
Ukulungiselela umqadi webond
Nangona kunjalo, ikhonkrithi inenkqubo encinci yokufaka abasebenzi enzima xa kuthelekiswa neepavita.
Emva koko, ikhonkrithi kufuneka yomile kwaye inyange iintsuku ezininzi ngaphambi kokuba uyisebenzise.
uyifaka njani ilayisensi yomtshato
Isithembiso esikhethekileyo kuye
Ilebhu ikhulile imisesane yokuzibandakanya
ufuna ntoni ukutshata eTexas